Arakan Muslim: ကိုမိုးသီးဇွန်နှင့် Messenger News Journal တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
ကိုမိုးသီးဇွန်နှင့် Messenger News Journal တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
ကျွန်တော်တို့က တတ်နိုင်သမျှ ဆောင်ရွက်ပေးချင်တာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုရင် ဒီနေ့ မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အပြောင်းအလဲအပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့ မြင်တဲ့အမြင်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးကို တင်ပြပေးမယ်။ အခု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်ပြီး ပြောင်းလဲနေတယ်၊ သူ့ရဲ့ ပြောင်းလဲမှုကို ကျွန်တော်တို့က အယုံအကြည်ရှိတယ်။ သူ့ကို ကူညီဖို့ အင်တာနေရှင်နယ်ကို မေတ္တာရပ်ခံ ပေးချင်တယ်။ ဒါဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက်ပါ။ သူ့အတွက်ရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူ့အတွက်မှ မဟုတ်ဘူး။ သူဦးဆောင်တဲ့ အပြောင်းအလဲမှာ ကျွန်တော် တို့ တတ်နိုင်သမျှ စည်းလုံးညီညွတ်ပြီးတော့ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူ့အတွက်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးက အရမ်းကျဆင်းနေပြီ။ သူကလည်း ပြောင်းလဲနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခက်အခဲ တွေ အများကြီးရှိတာပေါ့။ မြေတွေ သိမ်းခံနေရတာ လည်း ကြားတယ်၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်နေတာ တွေလည်း ရှိတယ်၊ အရင် အစိုးရ အဆက်ဆက်က ဖြစ်နေတဲ့ဟာကို သူ့အနေ နဲ့ ခေါင်းခံနေရတယ်၊ ချာလပတ်ရမ်းနေတာကို ကျွန်တော်တို့ နားလည် ရမှာပေါ့။
ကျွန်တော်ကလည်း ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ယောက် ပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့DNA ကို စစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ရှမ်း လည်းပါမယ်၊ မွန်လည်း ပါမယ်၊ ဗမာလည်း ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဗမာ တွေဟာ နတ်ကိုးကွယ်မှုက ရှိတယ်။ နတ်ကိုးကွယ်မှု ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရိုးရာ ပါ။ ကျွန်တော် မိဘတွေက နတ်ကန်တော့တဲ့ အချိန်ဆိုရင် အဘိုးက ရှမ်းနတ်ကို ကန်တော့ရတယ်။ ရှမ်းခေါင်းပေါင်းတွေနဲ့ အဘိုးက သုံးခွဘက်ကပါ။ ရှမ်းသွေးလည်း ပါမယ်။ အမေ့ဘက်ကကျတော့ ကညွတ်တို့ ငါးရံ့နားဖားထိုးလို့ ခေါ်တာပေါ့။ မွန်ပေါ့ကွာ။ အဖေဘက်ကျတော့ ဦးမင်းကျော်တို့ပေါ့။ မြင်းဖြူရှင်လည်း ကိုးကွယ်ရတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဘုတ်ပလက်ထဲမှာ ပါတယ်လို့ သဘောပေါ့။ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်လည်း တိုင်းရင်းသား ဖြစ်တယ်။ ဗမာလည်း ဖြစ်တယ်။ ကရင် မွန်လည်း ဖြစ်မယ်ပေါ့။ ရခိုင်ရဲ့ အဓိကပြဿနာကို ကော်မရှင်ဖွဲ့ထားတယ်။ ဒီကော်မရှင်ကို ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဒီကော်မ ရှင်က မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးသပ်မယ်၊ ဘက်မလိုက်ဘဲ တရားဥပဒေအတိုင်း ဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ အဲဒီအတိုင်းပဲ ရပ်တည်သွားမှာပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်အရဆိုရင် ဗမ ပြည်ကြီးမှာ မတူခြား နားတဲ့ ဘာသာတွေ၊ မတူခြားနားတဲ့ လူမျိုးတွေ၊ အတူယှဉ်တွဲပြီး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နေတာက ကျွန်တော့် ရဲ့ အိပ်မက်တစ်ခုပေါ့။ကရင်လူမျိုးကော ဗမာကော၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကော၊ အစ္စလာမ်ကော၊ ခရစ်ယာန်ကော အားလုံး အတူတကွ နေထိုင်သွားတာကို ကျွန်တော့်ရဲ့ အဖြေတစ်ခုပါပဲ။
တစ်ခါ တစ်ဖက်မှာ ရိုဟင်ဂျာလို့ လည်းပြောတယ်။ ဘင်္ဂါလီလို့လည်းပြောတယ်။ မွတ်စလင်လို့ လည်း ပြောတယ်။ အဲဒီနည်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ဘာသာရေး ဆန့်ကျင်တဲ့အထိ ဖြစ်လာတယ်။ သူတို့က လူမျိုး ဖြစ်သင့်သလား၊ မဖြစ်သင့်ဘူးလား ဆိုတာ နိုင်ငံရေး သမားတွေက ခံစား ချက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်ပါတီ ကမှ ဆုံးဖြတ်လို့ မရဘူး။ လူတစ်ယောက်က လူမျိုးတစ်မျိုး ဖြစ်သင့်တယ်၊ မဖြစ် သင့်ဘူးဆိုတာ ဘယ်ပါတီကမှ မဆုံးဖြတ်ရဘူး။ Right လွှတ်တော်ကပဲ ဆုံးဖြတ်မှာပါ။ Right ကျွန်တော်ကပဲ ထောက်ခံခံ၊ မထောက်ခံခံ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ တရား လည်းမဝင်ဘူး။ ရိုဟင်ဂျာက သူ့ဘာသာသူ Claim လုပ်တယ်။ သူဘာသာသူ Claim လုပ်တာပဲဖြစ်မယ်။ ကိုယ်လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်တာ ရှိတာမှမဟုတ်တာ။ အဲဒါကို ဘာလို့ဆဲနေကြတာလဲ။ ဒီမိုကရေစီ ကိုယုံကြည်ရင် ဘယ်လွှတ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လိုက်နာရမှာပဲ။ အခုလူတွေတော်တော် များများက ရိုဟင်ဂျာပဲဖြစ်ဖြစ် မူစလင်ပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ကဘယ်သူ့ ကို အကျယ်ဆုံးဆဲသလဲ။ ဒါကတစ်ကယ်အဖြေမှ မဟုတ်တာ အဓိကအဖြေက တိုင်းရင်းသားဒေသမှာ တစ်ကယ့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိဖို့ပဲ။ ဒီလို ဖြစ်လာရင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘာမှဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တော့် ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာ ဘာသာရေး Conflict တွေ၊ လူမျိုးစု Conflict တွေ အများကြီး ကြုံရတယ်။ အသက် ၅ နှစ်ကျော် ကျောင်းစတတ်တဲ့ အရွယ်မှာ တရုတ်-ဗမာအဓိကရုဏ်းလည်း ဖြစ်တယ်။ တချို့တရုတ်တွေကို ကျွန်တော်တို့ မိဘတွေက ကယ်လိုက်တာမျိုး ရှိတယ်။ အခု အမေ့အိမ်သွားလည်ရင်းနဲ့ အဲဒီဦးတရုတ်ကိုလည်း တွေ့ချင်တယ်။ တရုတ်ဗမာအဓိ ကရုဏ်းတုန်းက အမေတို့က အိမ်ဘေးနားက တရုတ်မကြီး မနှင်းဆီကို ကယ်လိုက်တာပါ။ သူက သွေးနုသားနုကြီးနဲ့ပေါ့။ ဗမာတွေက ဖျက်ဆီး လိုက်ကြတာ။ ကျွန်တော့် မိဘ တွေက သိမ်ကြီးဈေးမှာ ဆိုင်ထွက် နေကြတာ။ ၂၇ လမ်းဝရန်တာကနေ ဟိုဘက်အုပ်ကြီး၊ ဒီဘက်အုပ်ကြီး ရိုက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီဟာကြီးကို အဲဒီ အရွယ်ကတည်းက အမှန်တရားလို့ မယူဆ ခဲ့ပါဘူး။ ၈၈ ကြီး ဖြစ်လာတော့ မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ရေး လမ်း ကြောင်းကို ဦးနေဝင်းက ဦးတည်ပေးနေတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အဲဒီအချိန်မှာ တာဝန်ရှိလာသူဖြစ်လာပြီ။ ကိုဇော်မင်းတို့လည်း ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဗကသက Statement ထုတ်တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မူဆလင် ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းကို လက်မခံနိုင်ဘူး။ နီးစပ်ရာ ကျောင်းသားတွေကို ပြန်ထိန်းယူတယ်။ ကျွန်တော် တို့ တောင်းတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဆက်တောင်းတယ်။ အဲဒါ ကျွန်တော်တို့ ရပ်တည်ချက်ပဲ။
တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကို ငြိမ်းငြိမ်း ချမ်းချမ်း ဖြစ်စေချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ နယူး ယောက်စ်က ဆရာတော်တစ်ပါးရှိတယ်။ သူပြောတာလေး ကောင်းတယ်။ နိုင်ငံတိုင်းက စပါးစိုက်နေကြတာပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှစိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ စပါးစိုက်တာ ဘာထူး ဆန်းလို့လဲ။ ဝါဒဖြန့်တာ များနေတယ်။ မစလ ခေတ်က စပါးစိုက်တာကို ဒါကို မြစိမ်းရောင်စစ်ဆင်ရေးတဲ့၊ နွေရာသီ စပါးစိုက်တော့ လည်း ရွှေဝါရောင် စစ်ဆင်ရေး ဆိုပြီး ရိတ်ကြတယ်။ ဟိုဘက်က ခိုးဝင်လာတဲ့ ကာလ က ရှိလာတော့ ဟင်္သာစစ်ဆင်ရေးဆိုပြီး လုပ်ပြန်ရော။ တကယ်က ခိုးဝင်လာရင် ဖမ်းရမှာပဲလေ။ Immigration အရ ရိုဟင်ဂျာမှ မဟုတ်ဘူး၊ တရုတ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ဂျပန် အကုန်လုံး ခိုးဝင်လာရင် ဖမ်းရမှာပဲ။ အခု ထိုင်းထဲကိုသွားရင်လည်း ထိုင်းက ခိုးဝင်လာရင် ဖမ်း မှာပဲ။ အမေရိကန်လည်း မက္ကဆီကိုတွေကို ဖမ်းပြီး ပြန်ပို့တာပဲ။ အမေရိကန်တွေဆို ဖမ်းတာ နည်းတာမှ မဟုတ်ဘဲ။ လက်ထိပ်ခတ်ပြီး ပြန်ပို့တယ်။ အပေါ်ကနေ ဖိထားတာတွေလည်း ရှိတယ်။ ဒါကို တွေ့နေရတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဘာမှ မပြောကြဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ Soveriegnty မှာ တရား ဥပဒေလုပ်ရတယ်။ သူ့နိုင်ငံထဲ မတရား ခိုးဝင်လာရင် လုပ်ရမှာပဲ။ အဲ့လို မလုပ်ဘဲနဲ့ အမျိုးသား ရေးလို သွားလုပ်တာ ဒီအကျိုးဆက်က သိပ်ကြီးတယ်။ ဒီလို ခိုးဝင်လာရင် လူရှစ်သိန်းလုံး ဖမ်းပြီး ပြန်ပြီး မောင်း ထုတ်လို့ရတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး ပုံစံနဲ့ အမျိုးသားရေး ပုံစံဆိုရင် တစ်ယောက်မျှ မောင်းထုတ်လို့ မရဘူး။ ဒါကို အစိုးရက သိဖို့လိုတယ်။ Smart ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး ကို သွားထိရင် ဒုက္ခရောက်လာမယ်။ ရပ်ပေးခဲ့တယ်၊ ပြောခဲ့တယ်၊ နားမထောင်ကြဘူး၊ အခုတော့ ပုံမှန် Right ထဲကို ပြန်လာရတယ်။ ဒေါ်စု လည်း ပြောလို့ မရဘူး။ ဒါကို ‘ဆဲ’နေကြတယ်။ အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ ဟာတွေပဲ။ သူက တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ အနေအထားကို မြင်နေတာပဲ။ မီဒီယာကိုလည်း အားကိုးပါတယ်။ ဒီသတင်းတွေကို လည်း မှန်မှန် ကန်ကန် အားကိုးပါတယ်။ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်လို့ တင်စား ထားတာ ဒီမဏ္ဍိုင်ကကို Virus ဖြစ်နေတယ်ကွာ။ ကျွန်တော်လည်း အများကြီး ဖြစ်နေတယ်။ ဒါ ဘယ်သူ့ ကို သွားအားကိုးမလဲ။ ကျွန်တော်တို့ မီဒီယာတွေ မရှိတုန်းက ပထမ ဆုံး သတင်းစာလေး သွားထုတ်ခဲ့တယ်။ မီးချောင်းလေးနဲ့ ဖောက်ပြီး သွားလုပ်ခဲ့တာ။ အာရုဏ်ဦး သတင်း စာလေးပေါ့။ သတင်းစာတွေ အများကြီး ဖြစ်လာပြီး လွတ်လပ်လာပြီ ဆိုတော့မှ အခြားလူမျိုး တစ်မျိုးကို သတ်ဖြတ်ဖို့က Ethically က လက်မခံ နိုင်တာ။ မဲမပေးရင်နေ၊ မထောက်ခံရင်နေ၊ ခေါင်းဆောင် မဖြစ်ရင်နေ၊ ဒါ ကျင့်ဝတ်အရကို ကမ္ဘာကြီးက လက်ခံ မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကို ကျွန်တော် ပြောပါရစေ။
ကမ္ဘာ ကြီးမှာ ဗမာတစ်စုတည်း နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ပီနန် ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ကျွန်တော့်ကို ပြောတယ်။ ဒီကိစ္စတွေဖြစ်တော့ ဆရာတော်ကြီး စိတ်ညစ်တယ်။ နယူးယောက်စ်ကို ကြလာ တုန်း က ကျွန်တော် ဆွမ်းကပ် တယ်။”မိုးသီးရေ မင်းတို့ဗမာတွေပဲ ရုပ်နဲ့နာမ် ရှိတာ မဟုတ်ဘူးကွ၊ ဘုရားဟော ထားတဲ့ လူမျိုးတိုင်း ဘာသာတိုင်းအတွက် ဖြစ်တယ်”လို့ သူပြောတဲ့ စကား လေး တစ်ခု ဖြစ် တယ်။ ရခိုင်က ဒီကိစ္စတစ်ခုလုံးကို ပြန်ချုပ်ရရင် Empowerment မရှိလို့ဘဲ။ ကျွန်တော် ရခိုင် လူမျိုးတွေအတွက် တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ခွကျတယ်။ ကနေဒါရောက်တော့ မွန်တွေနဲ့လည်း တွေ့တယ်။ သူတို့ ဘာတွေ ဆုံးရှုံးနေတာလဲဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုချင် တာလဲတောင် မသိကြဘူး။ ဘာလိုချင်တာ လဲလို့တောင် မသိကြဘူး။ ရခိုင်ကို ရခိုင်ပဲ အုပ်ချုပ်စေချင်တာ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ ကြားချင်နေတာက ရိုဟင်ဂျာကို ကျယ်ကျယ်ဆဲတာ ကြားချင်နေတာ။ အဲ့ဒါကို ကျွန်တော် တို့ မဆဲနိုင်ဘူး။ ထောက်ခံရင် ထောက်ခံ မထောက်ခံရင် နေ။ယုံကြည်ချက်နဲ့ ပြောမယ့်ဟာက ရခိုင်ပြည်သူတွေ ကို ရခိုင်နဲ့ အုပ်ချုပ်ခွင့် ပေးပါလို့ ဒီအစိုးရကို ပြောတဲ့ ခေါင်းဆောင်က ကျွန်တော် တစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှာ ဘယ်သူမှ ဒီစကား မပြော ရဲဘူး။ ကရင်ပြည်နယ်ကို ကရင် အုပ်ချုပ်ခွင့် ပေးပါလို့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ပဲ ပြောရဲသေးတယ်။ သမိုင်း တစ်လျှောက်လုံး ပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီလောက်ဆိုရင် ရှင်းမယ်ထင်တယ်။
ဒီ Issiue ကို Awareness အဖြစ်ဆုံးက မီဒီယာ ရယ် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ Confuse ဖြစ်နေတယ်။ ကင်တာ နား Message ကို Confuse ဖြစ်နေတာ။ အင်္ဂလိပ်လို နားမလည်တာလား မသိဘူး။ ပြိုဆင်းလာ ရင် တံတိုင်း ခတ် ရမယ်။ လက်ရှိတံတိုင်းက သေးတယ်။ ထပ်ခတ်ရမယ်။ ကျွန်တော် သမ္မတဖြစ်ရင်လည်း တံတိုင်းခတ်မှာပဲ။ တရုတ်ပြည်ဘက်လည်း ခတ်ရမယ်။ ဒါက အမျိုးသားလုံခြုံရေး ဖြစ်နေတယ်။ အထဲရောက်ပြီး သား မျိုးဆက် သုံးလေးငါးဆက်ဆိုရင် နိုင်ငံသား ပေးရမယ်။ သူ ဆိုလိုတာက အထဲရောက်ပြီးသား နိုင်ငံ သား သုံးလေးငါးဆက်ဆိုရင် မျိုးဆက် ပေးကို ပေးရ မယ်။ အဲဒီလိုမှ မပေးရင် မြန်မာအစိုးရ ပြဿနာ တက်မယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေလည်း ထပ် ပြဿနာ တက်မယ်။ ကျွန်တော် က ကမ္ဘာကို ပတ်ပြီး ထွက်လာတဲ့ သူအနေနဲ့ အကြံပေး တာ။
ဒီကို အကြာကြီးပဲ ရောက်နေတဲ့ တရုတ်တွေရှိ တယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ဦးတရုတ်ကြီးတစ်ဦးရဲ့ သမီးဟာ ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကြောင့် ကရင်သူပုန်တစ် ယောက်က တရုတ်ကြီးဆီ ပေးခဲ့တာ။ အမှန်တော့ သူက ကရင် လူမျိုး၊ အသားကလည်း ဖြူတယ်။ တရုတ်ကြီး ကလည်း မွေးစားထားတော့ တရုတ်ဖြစ်နေတာ။ အခု ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက အခုအထိ နိုင်ငံသား မဟုတ် သေးဘူး။ FRC ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကို လက်ခံမလား။ သူက နိုင်ငံခြားသား ဖြစ်သင့်လား မဖြစ်သင့်ဘူးလား။ Immigration Law 1982 နဲ့အညီ ပေးလိုက်ပါ။ အခုက မကျင့်သုံးလို့ ပြဿနာ ဖြစ်နေတာ။ ဥပဒေနဲ့ မညီဘူး ဆိုရင် ပြန်မောင်း ထုတ်ရမှာပေါ့။ အခု ကျွန်တော်လည်း ဗမာနိုင်ငံသား အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဖြစ်နေပြီ။ ဒီဥပဒေနဲ့ မကိုက်ရင် ကျွန်တော့်ကို ပြန်မောင်း ထုတ်ရမယ်။ အခု ကျွန်တော်ဟာ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ဆိုရင် နိုင်ငံခြားသား ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လို့ မရဘူး။ ကျွန်တော်လည်း ဗမာနိုင်ငံသား၊ ဗမာပြည်သူ တွေအတွက် တိုက်လာတာ။ ကျွန်တော့်မှာ အခု ဒီအခွင့်အရေး မရှိတော့ဘူး။ ဒီလောက်ဆိုရင် ရှင်းမယ် ထင်တယ်။
ကင်တားနားဆို လိုတာ အဲ့ဒီလို ဆိုလိုတာပါ။ ဂျင်နီဗာ ကွန်ဗင်းရှင်း အတိုင်း ပြောသွားတာပါ။ ဂျင်နီဗာ ကွန်ဗင်းရှင်းမှ တို့ဗမာတွေ မယုံတော့ဘူးဆိုရင် တော် တော်လေး ပြဿနာ ဖြစ်နေပြီ။ တစ်ပြည်လုံးမှားမယ့် အမှားကြီးပေါ့။ ဒါမျိုးက ဂျာမနီနာဇီအောက်မှာ ဂျာမနီ တစ်ပြည်လုံး မှားဖူးတယ်။ အမေရိကန်-ဗီယက်နမ် စစ်ပွဲမှာ အမေရိကန်တွေ မှားသွားဖူးတယ်။ ဒါကို ဘာခေါ်လဲ ဆိုတော့ မက်စ်တစ်ရီးယားလို့ ခေါ်တယ်။ ဒါက အစုလိုက် အပြုံလိုက် ရူးသွားတာ။ အမှန်တရားကို မသိဘဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ Information မှ မရတော့တာ။ Education ကလည်း စုတ်ပြတ်နေတယ်။ အဲလိုအနေ အထားမျိုးမှာ အမှန်တရားကို ပြောတာ။ ကင်တားနားက ဂျနီဗာ ကွန်ဗင်းရှင်းအရ ပြောနေတာ။ ဂျနီဗာ ကွန်ဗင်းရှင်း ကို ကုလသမဂ္ဂမှာ အကုန်လုံး လက်မှတ်ရေးထိုးထား တာ။ ဒါမှ လက်မခံဘူးဆိုရင် အလွန်အန္တရာယ်ရှိသွားပြီ။ ဒီဒုက္ခကို တို့လူထုကို အကျမခံနိုင်ဘူး။ ဒါကို အမုန်းခံ ပြီး ပြောရတော့မှာပါ။ Wake up! Burmese! မြန်မာတွေ နိုးလော့ ထလော့။ ကင်တားနား Message ကို ဘာသာပြန်မမှားဖို့ ပြောချင်တယ်။
အမေရိကန်လည်း Policy မျိုးစုံနဲ့ နာမည်ပျက်လိုက် ကောင်းလိုက်နဲ့ နေလာတယ်။ အမေရိကန်သုံးနေတဲ့ ရေနံ ရဲ့ (၆၄)ရာခိုင်နှုန်းက အရှေ့အလယ်ပိုင်းက သွင်းနေတာ။ သူက အဲဒီနေရာကို အလွတ်မခံနိုင်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ ကိစ္စမှာ Model Issue လိုပဲ ဖြစ်နေတယ်။ ပါးစပ်နဲ့ဘဲ ထောက်ခံသလို ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီလိုအနေ အထားပဲ။ အခု အဲလိုအနေအထားက မပိုသေးပါဘူး။ မြန်မာပြည်ကို အကျိုးစီးပွားအတွက် သူက စိတ်မဝင် စားသေးပါဘူး။ အချို့လည်း သုံးသပ်နေကြတယ်။ တရုတ်ရဲ့ Power ဘယ်လိုဆိုလဲ သုံးသပ်ကြတယ်။ ဒါကို ကျွန်တော် အင်တာဗျူးလုပ်ထားတာ ရှိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်က ကျွန်တော့်ဘလော့ခ်မှာ တင်ထားတယ်။ မြန်မာပြည်ကို အမေရိကန်က မဟာ ဗျူဟာကျကျ စိတ်မဝင်စားသေးဘူး။ စိတ်ဝင်စားရင် လစ်ဗျားကို အမေရိကန် ဘယ်လို ဝင်သွားလဲ။ Model Issue ဖြစ်နေလို့ ကြည့်နေတာ။ ဒီဒေသကို အချိန်မရွေး ဝင်လာလို့ ရတယ်။ သူဝင်လာရင် ဘယ်သူမှ မတား ရဲဘူး။ ကြည့်နေတဲ့အ တွက် အေးအေးဆေးဆေး စောင့်နေတာ။ သူဝင်လာရင် တရုတ်က မကန့်ကွက် ရဲဘူး။ သူဝင်လာရင် Share ပြီးစားမှာ။
ကမ္ဘာကြီး သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းက Multi-culture သွားနေတာ နိုင်ငံတိုင်းမှာ လူမျိုးစုတွေ မတူကွဲ ပြားတဲ့ ဘာသာတရားတွေ ရှိတယ်။ တစ်ယောက်တည်း သွားလို့ မရတော့ဘူး။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ မူဆလင်၊ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ၊ ခရစ်ယာန် အဲ့လိုပြဿနာတွေ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဖြစ်နေတယ်။ နိုင်ငံသား တစ်ခုတည်း ရပ်တည်လို့ မရတော့ဘူး။ရှေ့လျှောက် ပိုခက်လာပြီ။ အချို့က ကမ္ဘာကြီးက ရွာလေးတစ်ခု ဖြစ်လာ တယ်ဆိုပြီး ဥပမာ ကျွန်တော့်ရဲ့Identity တွေကလည်း Multi-identity ဖြစ်လာပြီ။ ကျွန်တော်ဆိုရင် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်၊ ပါတီခေါင်းဆောင်၊ သူပုန်၊ တောထဲမှာ တိုက်လာတယ်။ အမေရိကန် ရောက်သွားတယ်။ အမေ ရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်လာတယ်။ စသဖြင့် Identity တွေ ပြောင်း လာတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံသား မြန်မာလူမျိုး အချို့ဆိုလည်း ကနေဒါနိုင်ငံသား ဖြစ်လာတယ်။ ထိုင်း စင်္ကာပူတို့လည်း များလာပြီ။ စင်္ကာပူနိုင်ငံသား ဂျပန် နိုင်ငံသား တစ်ခုတည်းနဲ့ ရပ်တည်လို့ မရတော့ဘူး။ ပညာတစ်ဘာသာတည်းနဲ့ ရပ်တည်လို့ မရတော့ဘူး။ အခု မြန်မာနိုင်ငံသား အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ် လည်း Local ကို သူပြန်လာမယ်လုပ်မယ်၊ Co-operation တွေလည်း စီးပွားရေးအရ တက်လာတော့မယ်။ ဒါဆိုရင် ထိုင်းတွေက အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ မြန်မာဒုက္ခသည် ငါးသန်းကို လက်ခံထားတယ်။ တို့က ရိုဟင်ဂျာ ရှစ် သိန်းကို Allergy ဖြစ်နေတယ်။ မြန်မာတစ်ပြည်လုံးကို ပျောက်တော့မလိုလိုပေါ့ကွာ။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေက နိုင်ငံရေးအခြေအနေတောင် မသိကြဘူး။ မသိတာကလည်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း မသိချင်တာ တွေလေ။ အနာဂတ်ကို ဒီအတိုင်းသွားရင် Financial ကလည်း အရမ်းအားနည်းတယ်။ Micro economics မှာလည်း Stable မရှိဘူး။ Banking system ကလည်း ဂျမ့်ဖြစ်နေတယ်။ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ကို တည်ဆောက်ရတဲ့ ပြည်သူတွေက လုံးဝကို Zero ဖြစ်သွားပြီ။ လုပ်စရာနှစ်ခုပဲ ရှိတယ်။ တစ်ခုက မြေကြီး၊ တစ်ခုက Education လည်းမရှိဘူး။ မြေကြီးနဲ့ လုပ်ဖို့က ကျွန်တော်တို့ လက်ထဲမှာ ဘာမျှ မရှိဘူး။ နောက် ငါးနှစ် ဆယ်နှစ် ဗမာရဲ့ အနာဂတ်က မသေချာ ဘူး။ ဒီကြားထဲမှာ Energy မရှိဘူး။ သူတို့သုံးနေတဲ့ Energy က Diesel နဲ့မောင်းနေတာ။ စက်ရုံကြီးတစ်ရုံ တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ လျှပ်စစ်မဟုတ်ဘူး။ လိုအပ်လို့ အလုပ်သမား နှစ်သောင်း သုံးသောင်းနဲ့ စက်ရုံကြီး တည်ဆောက်ရင် ဒီရပ်ကွက်က လူထုက ပြန်မှောင် သွားမှာပဲ။ အရင်ကလို ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပြီး ဆန္ဒပြန် ပြရ မှာပဲ။ ဒီဘက်ကို ပေးရတော့ ဟိုဘက်ကို မလုပ် နိုင်ဘူး။ သေးသေးလေးတွေပဲ လုပ်နိုင် တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးသိန်းစိန်၊ သူရဦးရွှေမန်း၊ တည့်ဖို့ လိုတယ်။ ပြီးတော့ ၈၈ အားလုံး တက်ရမယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် Exclusive လုပ် လို့မရဘူး။ အဲ့ဒါတွေ အားလုံးက နောက်ထပ် အုံကြွဖို့ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ မဟာဗျူဟာကတော့ ဦးသိန်းစိန်ကို အကူအညီပေးဖို့။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ လူငယ်တွေ အလုပ်တွေရဖို့၊ လူငယ်တွေ Stable ဖြစ်ဖို့၊ အလုပ်တွေ ပြန်လုပ်ဖို့ လာခဲ့တာ။
Source : Messenger News Journal
Posted by arakanmuslim at 8:09 AM